Baraf iyo dabaylo saameeyay Maraykanka - BBC Somali - Warar
Baraf iyo dabaylo saameeyay Maraykanka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 Febraayo, 2013, 10:33 GMT 13:33 SGA
Boqolaal kun oo qof ayaa waqooyi bari Maraykanka ah koronto la'aan iyadoo baraf xoogan uu socdo maalintii labaad.
Saldhiga korontada ee nuckliyeerka ee Massachusetts, ayaa la xiray iyadoo shan gobol ee ku yaala xeebaha bariga ay ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah.
Malaayiin qof oo degan Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York iyo Maine ayaa loo sheegay inay gurigooda joogaan.
Duulimaadyo badan ayaa la joojiyay.
Dabaylo ayaa soo riday geedihii iyo tiirarkii korontada. Ilaa hal meter oo baraf ayaa la filayaa inuu meelaha qaar ka da'o. ku dhawaad duulimaadyadii oo dhan ayaa la joojiyay, tareenadiina waa la hakiyay.
Amerika Nin xukun dil ah sugayay oo la sii daayay
Ukraine: Ruushka "diyaar uma aha" dagaal
14 Maarso 2014
Dowladda "oo qabsatay" Buulobarde
Sawirrada diyaaradda "waa qalad"